इटालीमा ‘प्रलय’ - कोसेली - कान्तिपुर समाचार
मंसिर २, २०७४ हिमेश
काठमाडौं — इटालीमा ‘प्रलय’ । त्यहाँका लगभग सबै मिडियाले इटाली विश्वकपमा छनोट हुन नसकेपछि प्रयोग गरेको एक मात्र शब्द हो, यो । बाइबलमा पृथ्वीमा प्रलय आउने प्रसङ्ग उल्लेख छ । त्यसपछि पृथ्वी पनि रहन्न । त्यसैसँग जोडेर इटालीका मिडियाले आफ्नो देश एक वर्षपछि रूसमा हुने विश्वकपमा छनोट नभएको घटनालाई प्रस्तुत गरे ।
फुटबलसँगै जोडिएर आउने देश हो, इटाली । यही इटाली अब विश्वकपमा छनोट हुन नसकेको घटनालाई प्रलय भनिएको थियो त्यहाँ ।
साँच्चै एक वर्षपछि हुने विश्वकपमा इटाली हुनेछैन, त्यसैले आउने विश्वकपले पस्कने स्वाद पनि यसअघिका संस्करण भन्दा फरक हुने छ । इटालीको फुटबलले एक खास प्रकारको स्वाद पस्कने गर्छ । र, यो हो, डिफेन्समा बढी जोड दिएर खेल्ने तरिका । यसरी नै खेलेर इटालीले चारपल्ट विश्वकप जित्यो । अन्तिमपटक सन् २००६ मा इटालीले विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो उपाधि जितेको थियो । अहिले लाग्छ, कति पुरानो प्रसङ्ग भइसकेको छ ।
के अब डिफेन्समा जोड दिएर खेल्ने जमाना रहेन त ? फुटबलमा प्राय: दोहराएर सुनाइने सिद्धान्त हो, आक्रामक फुटबल खेलेर खेल जितिन्छ, रक्षात्मक रहेर खेल्दा उपाधि जितिन्छ । के यी दिन गए त अब ? इटाली छनोट हुन नसकेपछि उब्जिएको यो पहिलो प्रश्न हो, आम फुटबलप्रेमीको जिज्ञासा । तर सबै कुरा यस्तो होइन । इटाली जम्माजम्मी यसअघि एकैपल्ट मात्र यसरी छनोट हुन असफल थियो १९५८ मा । यो ६० वर्षअगाडिको घटना हो । इटाली सन् १९३० को पहिलो विश्वकप पनि खेलेका थिएन, फरक कारणले ।
म्याराडोनाले आफ्नो व्यावसायिक फुटबलको उत्कृष्ट क्षण इटालीमै बिताए । त्यसैले उनी अर्जेन्टिनापछि इटालीको समर्थन गर्ने गर्छन् । इटाली छनोट हुन नसकेपछि यिनै म्याराडोना पनि चुप लागेर बस्न सकेनन् । उनले भनेका छन्, इटाली नहुनुको सत्य उनलाई सह्य भएको छैन । म्याराडोनालाई निकै दु:ख लागेको छ, त्यसैले उनले पनि उही कुरा दोहोर्‍याएका छन्, अबको विश्वकप फरक हुनेछ ।
रोमका केही मिडियाले लेखेका छन्, यसपल्ट इटाली विश्वकपमा छनोट नहुँदा कोही रोएनन, किन त ? किनभने अहिलेको टिम विश्वकपका लागि छनोट हुन योग्य नै छैन । खासमा धेरै इटालीका समर्थक खुसी नै छन्, किनभने उनीहरूलाई आफ्नो देशको खेल हेर्न अब रूस जानुपर्ने छैन । एक प्रकारले व्यंग्य हो, यो । अझ भनौं अथाह पीडापछि पोखिएको गुनासो । जुन देशमा लोग्ने–स्वास्नीको झगडाको प्रमुख कारण फुटबल हुन्छ, त्यही देशले विश्वकप नखेल्ने भएपछि कसको मात्र चित्त दुख्दैन र ?
इटालीले वास्तवमै युरोपेली छनोटमा निकै खराब खेल्यो । इटाली छनोटको समूह ‘जी’ मा थियो र यसमा परेको अर्को टिम थियो, स्पेन । छनोटका क्रममा इटालीले स्पेनलाई छुन पनि सकेन, त्यसैले दोस्रो स्थानमा रह्यो । दोस्रोमै रहेर इटालीले प्ले अफको अवसर पाएको थियो । त्यसमा पनि स्विडेनको हातबाट माथ खायो । प्ले अफको पहिलो लेग १–० ले गुमाएको इटालीले दोस्रो लेग घरमा गोलरहित खेल्यो । सानसिरोमा उपस्थिति ७० हजारभन्दा बढी दर्शकको विश्वासभन्दा पर रहेर ।
यसपल्ट इटालीलाई भाग्यले कहाँनिर धोका दियो त ? पूरा कथा यसरी सुरु हुन्छ र यो कथामा छन्, एक ठूलै खलनायक । यी अरू कोही होइनन्, बरु प्रशिक्षक जियामपिएरो भेन्टुरा हुन् । एन्टोनिया कोन्टेले इटाली छाडेपछि उनको स्थानमा आएका थिए, यी भेन्टुरा । उनलाई मिडियासामु प्रस्तुत गर्ने क्रममा इटालीको फुटबल संघले भनेको थियो, अब भेन्टुरा र उनको टिमले नयाँ इतिहास कोर्नेछ । नभन्दै यस्तै भयो, इतिहास त बन्यो, तर खराब इतिहास ।
त्यो घोषणाको एक वर्षपछि नै इटाली विश्वकप पुग्न सकेन । सानसिरोमा खेल सकेलगत्तै इटालीका गोलरक्षक जियानलुगी बुफोनले आँसु रोक्न सकेनन् । उनी रोएको तस्बिरले इटाली छनोट हुन नसकेको तथ्यलाई सधैं सम्झाउनेछ । खेल चल्दै गर्दाको एउटा घटनाले भने सबै कथा भन्छ । खेलका क्रममा भेन्टुराका एक सहायक डिफेन्सिव मिडफिल्डर ड्यानिएल डे रोसीतर्फ गएछन् र भनेछन्, ‘वार्म अप गर ।’ प्रशिक्षकको संकेत थियो, उनलाई मैदानमा पठाइँदै छ ।
यस्तोमा रोसीले उल्टै प्रश्न गरेछन्, ‘म किन ? मेरो मैदानमा के काम छ ? इटालीलाई बराबरी चाहिएको होइन, चाहिएको जित हो ।’ रोसीले खासमा भन्न खोजेका थिए, उनलाई होइन, मैदानमा छिराउनुपर्ने त फरवार्ड लोरेन्जो इनसिग्नेलाई हो । इटालीका खेलाडीमध्ये इनसिग्नेलाई सबैभन्दा कलात्मक र प्रतिभाशाली मानिन्छ । उनकै खेल त हो, अहिले सिरी ए मा नेपोलीले राम्रो खेलिरहेको । तर भेन्टुराले यी २६ वर्षीय खेलाडीलाई वास्तै गरेनन्, जति बेला इटालीलाई उनको खासै आवश्यकता थियो ।
यी प्रशिक्षक भेन्टुराले कति खराब नीति लिएका थिए, यसबाट प्रस्ट हुन्छ । प्ले अफअगाडि नै इटालीको टिमका केही प्रमुख खेलाडी बैठक बोलाएका थिए, आफ्ना प्रशिक्षकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै । प्रशिक्षकको रणनीतिप्रति उनीहरूलाई पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । तर केही भयो कि भेन्टुरा राजीनामाको धम्की अगाडि ल्याइहाल्थे । स्विडेनविरुद्ध स्टकहोममा भएको पहिलो लेगको खेल गुमाएयता इटाली मिलानमा ३–५–२ को रणनीतिले खेलेको थियो ।
यो रणनीतिको किन चाहियो भने यसअन्तर्गत भेन्टुराले इनसिग्नेलाई खेलाउनु नै परेन । स्विडेन आपैंmले डिफेन्समा जोड दिइरहेको थियो, तर इटाली पनि के कम, तीन सेन्टर ब्याक्स राखेको थियो टिममा । इटालीले खेलका क्रममा एकपछि अर्को क्रस मात्र गर्‍यो । क्रसमाथि क्रस । अनि प्रत्येक क्रसलाई सजिलै क्लियर गर्थे, अग्ला र बलिया स्विडेनी डिफेन्डरहरू । प्रत्येक पासलाई उनीहरूले सजिलै हेड गरेर कम असरदार पारिरहेका थिए ।
कोन्टे हुँदा तिनै खेलाडीले क्या राम्रो खेल्थे, भेन्टुराको पालामा ती सबै निकम्मा देखिए । फेरि युरोपमा यिनै इटालीका क्लब मज्जाले खेलिरहेका छन् । तर यस्तै प्रदर्शन देशका लागि भने छैन । स्पेनविरुद्ध म्याड्रिडमा भएको खेल इटालीले ३–० ले गुमाएपछि त प्रशिक्षकले टिमलाई कसरी खेलाउने हो भनेर नै किटान गर्न सकेनन् । उल्टै उनी भ्रमित हुन थाले । इटालीले खेलेका पछिल्ला चार खेलमा टिमले तीन फरक रणनीति प्रयोग गरेको थियो, जुन प्रत्येक खेलमा असफल रह्यो ।
त्यसैले यो कथा हो, एउटा खराब प्रशिक्षकले कसरी टिमलाई असफल बनाउन सक्छ भन्नेको उदाहरण । यी तिनै प्रशिक्षक हुन्, जसले धेरै क्लब त सम्हाले, तर केही जित्न सकेको इतिहास छैन । विश्वास नहुन सक्छ, भेन्टुराले सिरी डी, सी र बीका उपाधि त जिते, तर त्योभन्दा अरू केही पनि होइन । पछिल्लो समय युरोपतिर नजर लगाउनुपर्छ, केही ठूला क्लबमा इटालीकै प्रशिक्षक बढी छन् । तर इटाली आपैंmले राष्ट्रिय टिमका लागि यति खराब प्रशिक्षक किन चुन्यो, त्यो कसैलाई थाहा छैन । अहिले नतिजा सबैसामु छ र यो हो, प्रलय ।